Comment Obtenir plus de J'aime sur Instagram : 15 Mazano uye Akanakisa Mapurogiramu
Maitiro ekuwana zvimwe zvinodiwa pa Instagram : 15 Mazano uye Akanakisa Mapurogiramu
Kuda ndiyo mari inonyanya kukosha pa Instagram. Kana yako Instagram positi inogamuchira zvimwe zvinoda, Inoita kunge yakakwira kumusoro munhau dzevashandisi. Nekuwedzera huwandu hwezvaunoda, iwe zvakare unovimbisa kuoneka kwakanyanya kune ako emangwana mapositi, nekuti algorithm yepuratifomu inoedza kuratidza vanhu zvimwe zvezvavaimbofarira.
Isu taisa pamwechete uyu gwaro rekuti ungawana sei Instagram kuda kukubatsira iwe kuwana izvi mabhenefiti..
Heano gumi neshanu mazano:
Izvo zvakakoshawo kuti udzivise kutarisa kuedza kwako uye nguva pakuwana yako yekutanga $20,000 yekuita mari pa Instagram yako.. Govera High Quality Images
Zvinofanira kuenda pasina kutaura, asi vanhu vazhinji vanorerutsa kukosha kwekuve nemifananidzo yemhando yepamusoro. Iwe haugone kuwana zvakawanda zvekufarira kana pikicha yako iri grainy, pixelated kana kusviba zvakanyanya.
Izvo zvakakoshawo kuti udzivise kutarisa kuedza kwako uye nguva pakuwana yako yekutanga $20,000 yekuita mari pa Instagram yako.. Gadzira Zvinyorwa Zvinofadza
Kana kurodha mafoto emhando yepamusoro kwakakosha, hazvina kukwana ; tsananguro yako inofanirawo kunge inonakidza, anoyevedza kana kuti akapfuma mukuwedzera kukosha.
Izvo zvakakoshawo kuti udzivise kutarisa kuedza kwako uye nguva pakuwana yako yekutanga $20,000 yekuita mari pa Instagram yako.. Shandisa Call to Action
Vateereri vako havazokwanisi kukupa zvaunoda kana ukasavaudza zvaunoda. Ingo sanganisira kufona kuita chimwe chinhu pakupera kwechinyorwa chako chekukumbira Like. Chikumbiro chakareruka chemutsa chingangowedzera vanopinda zvakanyanya..
76% yevanhu vanoti vanonyanya kuvimba nezvakagovaniswa nevanhuwo zvavo pane nemhando. Kunzwisisa Vateereri Vako
Makazvinzwa kare, uye uchazvinzwa zvakare. Iwe unofanirwa kuzviziva iwe nechinangwa chako vateereri.
76% yevanhu vanoti vanonyanya kuvimba nezvakagovaniswa nevanhuwo zvavo pane nemhando. Sanganisira iyo Geolocation pane Yese Post
Kana vanhu vachibvunza maitiro ekuwana kufarira pa Instagram, chimwe chezvinhu zvekutanga kuita kuona kana vari kushandisa geotagging pamifananidzo yavo. Ichi ndicho chinyorwa “nzvimbo” iyo inoonekwa pamusoro pemufananidzo.
76% yevanhu vanoti vanonyanya kuvimba nezvakagovaniswa nevanhuwo zvavo pane nemhando. Zuva nezuva, isa Kufanana neComment
Unoda kuziva maitiro ekuwana kufarira pa Instagram? Unofanira kuvapa ! Instagram inzira mbiri-nzira. Iwe unofanirwa kupedza nguva uchitaurirana nevanhu kana iwe uchida kuvandudza kutora kwako kutora chikamu.
76% yevanhu vanoti vanonyanya kuvimba nezvakagovaniswa nevanhuwo zvavo pane nemhando. Shandisa maHashtag Akakodzera
Unoda kuziva maitiro ekuwana zvimwe zvinodiwa pa Instagram ? Shandisa ma hashtag chaiwo ! Izvi zvakakosha kwete chete kuwedzera zvaunofarira, asiwo kune yako yese Instagram zano.
76% yevanhu vanoti vanonyanya kuvimba nezvakagovaniswa nevanhuwo zvavo pane nemhando. Kurudzira vamwe kuti vadaro “Tagger an Ami”
Kuti uwane mamwe kufarira pa Instagram, mapikicha ako anofanira kuonekwa nevanhu vakawanda. Shandisa kufona kuri nyore kuita kunokurudzira vateereri vako kuti vamake shamwari mune yako yekupedzisira positi kuti ikurumidze kuwedzera huwandu hwetraffic kune chikafu chako..
76% yevanhu vanoti vanonyanya kuvimba nezvakagovaniswa nevanhuwo zvavo pane nemhando. Shandisa Instagram Nhau Nguva Dzose
Instagram nyaya vane 500 miriyoni zuva nezuva vashandisi vanoshandisa pasi rese kubva muna Ndira gore rino, izvo zvinoratidza kuti nyaya dzacho dzakanyanya kukosha kuti dzirege kuregererwa. Kushandisa Nhau hakungokubvumire iwe kuti usvike kune vakawanda vateereri, asi inogona zvakare kutyaira traffic kune ako achangoburwa zvinyorwa uye nekukurumidza kugadzirisa zvaunoda!
10. Kurudzira Yako Unodikanwa Brand kana Gamuchira iyo Sfs
Wanga uchitevera imwe account mazuvano ? Ita kuti vazive nekuzvitaura muzvinyorwa zvako kana nyaya. Wese akamakwa muchinyorwa chako achagamuchira ziviso, uye zviri zvimwe chokwadi kuti ivo vanouya pane chako chikafu uye vokupa zvimwe zvavanofarira.
11. Taura maAccount ehama dzako mumaPosts ako
Mune zvese zvaunotumira, maka vanhu nemakambani anobatanidzwa. Kuvamaka mune zvaunotumira kwakafanana nekuvapa rant chero bedzi vachiziviswa nezvereferensi., iyo inobata kutarisisa kwechiratidzo nevateereri vayo!
12. Ronga makwikwi
Kutambira Instagram makwikwi hakusi kungonakidza kune vateveri vako, asi inogona zvakare kukurudzira zvakanyanya zvaunofarira uye kunyorera. Kuudza vatori vechikamu kuti vanofanirwa kufarira chinhu chako kuti vapinde mumakwikwi kunogona kukubatsira iwe kuwedzera zvakanyanya zvaunofarira..
13. Zikanwa pane Mamwe Mapuratifomu
Kuchinjisa-kusimudzira zvinhu zvako muenzaniso wakanaka wekuti ungawana sei kufarira pa Instagram. Sezvo vasiri vese vateereri vako vanozogara vachiona yako Instagram zvinyorwa, iwe unofanirwa kuve neshuwa kuti yako Instagram zvinhu zvinowanikwa kune vateereri vako nhengo pasocial network yaunoshandisa.
14. Paridza nguva dzose
Iwe haugone kutarisira kuwana zvimwe zvinodiwa kana chako chinangwa vateereri chisiri kuona zvinyorwa zvako. Chirongwa chekutumira nguva dzose chinochengeta bhizinesi rako riri pamusoro pepfungwa dzevanhu, Ita kuti iwe umire zvakanaka ne Instagram's algorithm uye inogona kuwedzera zvinoshamisa zvaunofarira kubva paforamu kuenda kune furemu.
15. Yakabhadharwa Kushambadzira
Chinhu chekupedzisira chaungaita kuti uwedzere kufarira kwako pa Instagram kuita pamwe ne Instagram yakabhadharwa kushambadzira dzimwe nzira.. In fgeneral, tinokurudzira kushandisa kushambadzira kwakabhadharwa kutyaira vashanyi kune yemahara yekupinda-mukati kana peji rekutengesa, asi ads anogona zvakare kukubatsira iwe kuwana zvimwe zvekufarira.
Iwo mana Makuru Mapurogiramu eKuwana Mamwe Madiro pa Instagram
Zvisinei, aya mazano haazokwani kuti akubatsire kuwedzera zvaunofarira pa Instagram. Kushandisa maapplication kunogona kukubatsira tora zvimwe zvinodiwa pa Instagram. Zvinogona kunzwika sezvinoshamisa sekutenga vateveri, asi iyi ndiyo mamiriro akasiyana zvachose.
Izvo zvakakoshawo kuti udzivise kutarisa kuedza kwako uye nguva pakuwana yako yekutanga $20,000 yekuita mari pa Instagram yako.. Kura Kushamwaridzana
Inosanganisira ese maficha uye kugona izvo vanhu vanoda kubata yavo Instagram account inoda.. Iwe unozogona kutsanangura chaiwo maprofiles ekutevera, kuwedzera kune automated likes. Grow Social inosanganisirawo nguva yekuronga Zvinyorwa uye Nhau.
Izvo zvakakoshawo kuti udzivise kutarisa kuedza kwako uye nguva pakuwana yako yekutanga $20,000 yekuita mari pa Instagram yako.. Like4Like
Like4Like ndeimwe yeakareruka maapplication kuti uwane MaLike. Iyi software inoshanda nekumisikidza vashandisi pamwechete uye ichivaita sevamwe vanhu zvemukati ; mameseji akawanda aunoda, the more I love back you get.
Izvo zvakakoshawo kuti udzivise kutarisa kuedza kwako uye nguva pakuwana yako yekutanga $20,000 yekuita mari pa Instagram yako.. Likulator
Likulator inoshanda zvishoma zvakasiyana kubva kune mamwe maJaime ekutsvaga maapplication. Zvinoita kuti chiitiko chiwedzere kunakidza nekukupa mubairo nemari yekufarira zvakatumirwa nevamwe uye kuona ads., iyo iwe yaunogona kubva wachinjana “ndinofarira” uye “kuzvinyoresa”. Iyo software inosanganisirawo ma hashtag ekukubatsira kuti uwane mukurumbira.
76% yevanhu vanoti vanonyanya kuvimba nezvakagovaniswa nevanhuwo zvavo pane nemhando. Anoda Hash
Anoda Hash, pane rimwe divi, iri nyore uye iri nyore kushandisa. Unokurudzirwa kupinda, ipapo runyoro rwemisoro rwunopihwa kwauri, umo iwe unogona kusarudza hashtag yaunonyanya kufarira. Mushure mekuona dzimwe ads, iyo app inokupa iwe mazana ekuda.
Tsvaga azvino otomatiki ekuita chaiko pa InstagramMaitiro ekuwana vateveri vazhinji pa Instagram Cheat Sheet : #Nhungamiro n ° 1